Manana minisitry ny fizahantany vaovao i Afrika Atsimo: Iza i Lindiwe Sisulu?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Manana minisitry ny fizahantany vaovao i Afrika Atsimo: Iza i Lindiwe Sisulu?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Hon. Liniwe Nonceba, minisitry ny fizahantany any Afrika atsimo
Ny Alarobia 4 Aogositra Ny Hon. Lindiwe Nonceba Sisulu dia minisitry ny fari-tany, rano ary fidiovana ho an'i Afrika atsimo. Tamin'io andro io dia nankasitraka ny famotopotorana SIU momba ny departemantany izy mba hialana amin'ny hosoka sy kolikoly. Andro iray taorian'io ny alakamisy 5 aogositra io minisitra io dia notendrena ho minisitry ny fizahantany afrikanina tatsimo.
Ny fomba fanao amin'ny kolikoly manerana ny departemantam-panjakana sy ny orinasam-panjakana dia tsy miavaka na mitokana amin'ny rano sy fidiovana.
Vonona ny hiady amin'ny ekipa mpandresy hanangana ny fizahantany any Afrika ny Birao fizahantany afrikanina
Lindiwe Nonceba Sisulu dia teraka tamin'ny 10 Mey 1954 ary mpikambana ao amin'ny mpanao politika Afrikana Tatsimo, mpikambana ao amin'ny parlemanta nanomboka ny taona 1994.
Ny Hon. Lindiwe Nonceba Sisulu dia notendren'ny filohan'ny SA Cyril Ramaphosa ho minisitry ny fizahantany ao anatin'ny krizy COVID-19.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina miarahaba an'i Sisulu ary nanolotra ny fanohanany hanampy ny minisitra vaovao manova ny fitantarana an'i Afrika amin'ny alàlan'ny fizahan-tany.
Ny fahatongavan'ireo mpizahatany tany Afrika Atsimo dia nahatratra rakitsoratra tamin'ny Janoary 2018 niaraka tamin'ny 1,598,893 tamin'ny volana Janoary ary ny 29,341 ambany dia ambany tamin'ny volana aprily 2020 noho ny areti-mandringana COVID-19.
Toerana fizahan-tany i Afrika atsimo ary ny indostria dia mitaky vola be amin'ny vola miditra ao amin'ny firenena.
I Afrika atsimo dia manolotra safidy ho an'ny mpizahatany an-trano sy iraisam-pirenena, ankoatry ny hafa ny fizaran-tany voajanahary sy ny tahiry lalao, ny lova ara-kolotsaina isan-karazany ary ny divay tena hajaina. Ny sasany amin'ireo toerana itodiana malaza indrindra dia misy valan-javaboary maromaro, toy ny valan-javaboary Kruger mivelatra any avaratry ny firenena, ny morontsiraka sy ny morontsirak'i KwaZulu-Natal ary ny faritanin'i Cape Andrefana, ary ireo tanàna lehibe toa an'i Cape Town, Johannesburg, ary Durban.
Ny minisitra vaovao dia nitondra traikefa am-polotaona maro fa hanana ny tànany feno amin'ny fanarenana ny fireneny amin'ny fizahan-tany sy ny fizahantany. Amin'izao fotoana izao, ny COVID-19 dia eo amin'ny tampon'isa iray hafa ary ambany ny tahan'ny fanaovana vaksiny, mahatonga ny fizahan-tany iraisam-pirenena ho an'ity firenena ity tsy ho vita mihitsy.
Cuthbert Ncube, misolo tena ny indostrian'ny fizahantany afrikanina ho filohan'ny Eswatini miorina Birao fizahantany afrikanina namoaka fanambarana.
Ny ekipanay dia ny ekipanao! Ity ny hafatry ny fanantenana sy ny fanohanan'ny mpitantana ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany.
Vonona ny hanohana ny minisitra afrikanina tatsimo vaovao izahay. Hanampy an'i Afrika atsimo ihany izany, fa ny faritra sy firenena afrikanina rehetra izay mandray anjara betsaka amin'ny harinkarena faobe ny indostrian'ny fizahantany.
Cuthbert dia nilaza hoe: Voninahitra sy fientanentanana be izao rehefa mandray sy miarahaba an'i Hon Lindiwe Nonceba Sisulu ho minisitry ny fizahantany any Afrika Atsimo. Ny traikefany malalaka sy vanim-potoana dia azo antoka fa hitarika ireo hetsika fanarenana tsy ho an'i Afrika Atsimo ihany fa ho an'ny kaontinanta ankapobeny. I Afrika atsimo dia mijoro ho Hub an'ny fifandraisana Continental any Afrika.
Ao amin'ny Birao Afrikana fizahan-tany dia mijery fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa akaiky amin'ny Departemantan'ny fizahan-tany any Afrika atsimo amin'ny fanamorana ny varotra sy ny fampiasam-bola amin'ny fizahan-tany afrikanina, ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahan-tany afrikana, ny famerenana ny fitantarana sy ny fampiroboroboana ny fizahantany ara-tontolo iainana, satria manatsara ny fitomboana maharitra, ny lanja ary ny kalitaon'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany mankany afovoan'i Afrika izahay.
Ny fizahantany dia iray amin'ireo sehatra ara-toekarena manome toky indrindra eto Afrika. Manana ny fahafaha-mitarika ny fitomboana ara-toekarena ao amin'ny kaontinanta izy fa mampiorina ny fampandrosoana ara-toekarena miaraka amin'izany izay miantso fiaraha-miasa akaiky eo amin'ireo firenena mpikambana sy ny mpikirakira ny sehatra rehetra mba hampiroborobo ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany sy ireo masoivohon'izy ireo manerana ny kaontinanta afrikanina dia fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Afrika.
Iza Hon Lindiwe Nonceba Sisulu
Ny filoha afrikanina atsimo, Cyril Ramaphosa, dia nanendry ny minisitra Lindiwe Sisulu ho minisitry ny fizahan-tany amin'ny 5 aogositra 2021 amin'ny famolavolana izay tsy nisy tanjona manokana tao an-tsainy, afa-tsy ny fanesorana ny ankolafy Zuma ao amin'ny Kabinetra.
Ny minisitry ny fizahantany, Fish Mahlalela, dia notohanan'ny minisitry ny fizahantany vaovao. Ny andraikitry ny Departemantan'ny fizahantany dia ny famoronana fepetra ahafahan'ny fitomboana maharitra sy ny fampandrosoana ny fizahantany any Afrika Atsimo.
Minisitry ny fizahantany any Afrika Atsimo, Hon. Lindiwe Sisulu
Teraka tamin'ny mpitondra revolisionera i Sisulu Walter ary Albertina Sisulu in Johannesburg. Anabavin'ny mpanao gazety izy Zwelakhe Sisulu ary mpanao politika Max Sisulu.
Ramatoa Sisulu dia notendrena ho Minisitry ny fizahantany tamin'ny 5 Aogositra 2021. Izy dia Minisitry ny Fonenana, rano ary fanadiovana nanomboka ny 30 Mey 2019 ka hatramin'ny 5 Aogositra 2021. Minisitry ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa izy ny 27 febroary 2018 hatramin'ny 25 mey 2019 Ramatoa Lindiwe Nonceba Sisulu no minisitry ny fari-piainan'ny olona ao amin'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo ny 26 Mey 2014 hatramin'ny 26 febroary 2018.
Mpikambana tao amin'ny Parlemanta izy nanomboka tamin'ny taona 1994. Izy dia talen'ny fanokafana ny kaonferansa minisitra afrikanina momba ny trano sy ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe nanomboka ny taona 2005. Ramatoa Sisulu dia mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka Nasionalin'ny Kongresy Nasionaly Afrikanina (ANC) ary mpikambana ao amin'ny Komitim-pirenena miasa ao amin'ny ANC. Mpitahiry antoka ny South Africa Democracy Education Trust; mpiadidy ny Albertina sy Walter Sisulu Trust; ary mpikambana iray ao amin'ny Birao an'ny Nelson Mandela Foundation.
Fepetra momba ny akademika
Ramatoa Sisulu dia nahavita ny mari-pahaizana momba ny fampianarana ankapobeny (GCE) Cambridge University Level Ordinary tao amin'ny St Michael's School any Swaziland tamin'ny 1971, ary ny GCE Cambridge University Advanced Level tamin'ny 1973, ary koa tao Swaziland.
Manana mari-pahaizana Master of Arts amin'ny Tantara avy amin'ny Center for Southern Africa Studies ao amin'ny University of York izy ary M Phil koa avy amin'ny Center for Southern Africa Studies ao amin'ny University of York dia nahazo ny taona 1989 miaraka amin'ny lohahevitra thesis: "Women at Work and Ady Fanafahana any Afrika Atsimo. ”
Ramatoa Sisulu koa dia manana mari-pahaizana BA, mari-pahaizana BA momba ny tantara ary diplaom-pampianarana avy amin'ny Oniversiten'i Swaziland.
Asa / toerana / mpikambana / hetsika hafa
Teo anelanelan'ny taona 1975 sy 1976, dia notazonina noho ny hetsika politika Ramatoa Sisulu. Nanatevin-daharana an'i Umkhonto we Sizwe (MK) izy avy eo ary niasa ho an'ny rafitra ambanin'ny ANC nandritra ny sesitany tany 1977 ka hatramin'ny 1978. Tamin'ny 1979 dia nahazo fiofanana momba ny tafika manokana momba ny fahaiza-manaon'ny tafika izy.
Tamin'ny 1981 dia nampianatra Rtoa Sisulu tao amin'ny lisea afovoany Manzini any Swaziland, ary tamin'ny 1982 dia nanao lahateny tao amin'ny Departemantan'ny Tantaran'ny Oniversiten'i Swaziland izy. Nanomboka tamin'ny 1985 ka hatramin'ny 1987 dia nampianatra tao amin'ny Manzini Teacher Training College izy ary izy no lohan'ny mpandinika ny History for Junior Certificate Examinations ho an'ny Botsoana, Lesotho, ary Swaziland. Tamin'ny 1983 dia niasa ho mpampanonta ny The Times of Swaziland any Mbabane izy.
Niverina tany Afrika Atsimo Ramatoa Sisulu tamin'ny taona 1990 ary niasa ho mpanampy manokana an'i Jacob Zuma amin'ny maha lehiben'ny Sampam-pitsikilovana ANC azy. Izy koa dia talen'ny Administrator an'ny ANC tao amin'ny Convention for a Democratic South Africa tamin'ny 1991 ary administratera an'ny Intelligence tao amin'ny ANC Department of Intelligence and Security tamin'ny 1992.
Tamin'ny 1992, Ramatoa Sisulu dia lasa mpanolo-tsaina an'ny Komitim-pirenena momba ny zon'ny ankizy ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny fanabeazana, siantifika ary ny kolontsaina. Tamin'ny taona 1993 dia niasa ho talen'ny Fikambanana mpikaroka momba ny fikarohana Govan Mbeki tao amin'ny Oniversiten'i Fort Hare izy ary nanomboka ny taona 2000 ka hatramin'ny 2002 dia izy no filohan'ny foibe komandy ho an'ny fanarenana vonjy maika.
Ramatoa Sisulu dia mpikambana ao amin'ny Komitin'ny fitantanana, ny Fikambanan'ny polisy sy ny lalam-pitantanana ao amin'ny Oniversiten'i Witwatersrand tamin'ny taona 1993; mpikambana iray amin'ny fitantanana ny Sub-Council on Intelligence, Conseil Executive Transitional tamin'ny 1994, ary ny talen'ny komity maharitra miorina amin'ny Parliamentary on Intelligence tamin'ny 1995 ka hatramin'ny 1996.
Talohan'ny nanendrena azy ho minisitry ny asam-panjakana sy ny fitantanan-draharaham-bahiny, Rtoa Sisulu dia nanompo tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny nanomboka ny taona 1996 ka hatramin'ny 2001. Minisitry ny fitsikilovana izy hatramin'ny Janoary 2001 hatramin'ny aprily 2004; Minisitry ny trano hatramin'ny Aprily 2004 ka hatramin'ny Mey 2009; ary ny minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny veterana miaramila hatramin'ny Mey 2009 ka hatramin'ny Jona 2012.
Minisitry ny asam-panjakana sy ny fitantanan-draharaha ao amin'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo izy nanomboka ny volana Jona 2012 ka hatramin'ny 25 Mey 2014.
Fikarohana / Fanolorana / loka / haingon-trano / Bursaries sy famoahana
Namoaka ireto sangan'asa ireto Ramatoa Sisulu:
Vehivavy Afrikana Tatsimo amin'ny sehatry ny fambolena (bokikely). York University tamin'ny 1990
Vehivavy miasa sy tolona fanafahana amin'ny taona 1980
Ireo lohahevitra ao amin'ny taonjato faha-1991-n'i Afrika Atsimo, Oxford University Press. XNUMX
Ny toe-javatra iasan'ny vehivavy any Afrika atsimo, ny fandalinana ny toe-javatra any Afrika Atsimo. Komitim-pirenena miaro ny zon'ny ankizy. UNESCO. 1992
Fanaterana trano sy ny satan'ny fahalalahana: ny fanilon'ny fanantenana, ny fandaharam-potoana vaovao ary ny telovolana faharoa. 2005.
Andriamatoa Sisulu dia nahazo ny Fellowship Center Human Rights Center tany Genève tamin'ny taona 1992. Ny tetikasany ho an'ny United Nations Center dia nahatonga ny University of the Witwatersrand School of Business nanangana lalam-piofanana hanatsarana ny fahaizan'ny polisy miasa ao amin'ny mpikambana MK.
Nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny filoham-pirenena momba ny tetikady famakiana trano vaovao an'ny Institute for Housing of South Africa tamin'ny taona 2004 izy; Tamin'ny taona 2005 dia nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny siansa momba ny trano izy ho fankasitrahana ireo anjara biriky sy zava-bita miavaka amin'ny fanatsarana sy famahana ny olan'ny trano onenana.
Iza Andriamatoa Fish Mahlalela, ny minisitry ny lefitry ny fizahantany ao amin'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo?
Andriamatoa Fish Mahlalela dia Minisitra lefitra ao amin'ny Departemantan'ny fizahantany ao amin'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo nanomboka ny 29 Mey 2019. Mpikambana ao amin'ny kongresy nasionaly afrikanina ao amin'ny National Assembly of South Africa izy
Minisitra lefitra misahana ny fizahan-tany Fish Mahlalela
Nahazo ny mari-pahaizana momba ny matric avy any amin'ny lisea Nkomazi izy ary nahazo mari-pahaizana momba ny fitantanana sy ny fitarihana avy amin'ny University of the Witwatersrand.
Taorian'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny 1994 dia napetraka ho mpikambana ao amin'ny parlemanta izy ary nanomboka nanompo tamin'ny firenena tamin'ny andraikitra samy hafa na tamin'ny faritany na tamin'ny mpanao lalàna nasionaly.
Izy dia mpikambana ao amin'ny mpanao lalàna faritany, izay niasany ho toy ny mpitari-draharaha ny Komity maharitra momba ny kaontim-bahoaka (SCOPA) sy ny talen'ny Fikambanan'ny komitin'ny kaontim-bolam-panjakana any Afrika atsimo, ary izy koa dia mpitarika ny atsimo Komitin'ny fampandrosoana any Afrika momba ny kaontim-bahoaka.
Nandritra ny fotoana nitondrany tany amin'ny faritanin'i Mpumalanga, niasa tamina toerana mpanatanteraka maro izy ary indrindra ireto andraikitra manaraka ireto, MEC ho an'ny departemanta misahana ny tontolo iainana sy fizahan-tany, MEC ho an'ny departemantan'ny kolontsaina, fanatanjahantena ary fialamboly, MEC ho an'ny departemantan'ny governemanta eo an-toerana sy ny fifamoivoizana, MEC ho an'ny Departemantan'ny làlambe sy fitaterana, MEC ho an'ny departemantan'ny fiarovana sy filaminana, ary ny MEC ho an'ny departemantan'ny fahasalamana sy ny fampandrosoana sosialy.
Izy koa dia teo aloha dia nikarakara ny ANC Whip tao amin'ny komity portfolio momba ny fahasalamana ao amin'ny National Assembly
Andriamatoa Mahlalela dia manana tantara mirehareha amin'ny tolona fanoherana ny apartheid any Afrika Atsimo, natao sesitany tamin'ny taona 1980 ary nahazo fiofanana miaramila tany amin'ny firenena maro satria mpikambana ao amin'ny elatry ny tafika ANC, Mkhonto We Sizwe Tamin'ny 2002 dia voafidy ho filohan'ny ANC izy. tany amin'ny faritanin'i Mpumalanga tamin'ny 2002.